LA OGAADAY: RW Kheyre oo cabsi awgeed uga baaqsaday Labo kulan oo ka dhici lahaa Muqdisho? – Puntlandtimes
MUQDISHO(P-TIMES)- Wasiirka koowaad ee xukuumadda Faderaalka ee Soomaaliya Xasan Cali Kheyre ayaa shalay galab iyo maanta ka baaqsaday ka qeybgalka labo kulan oo muhiim ahaa, kaas oo mudo la qorsheynayay, isla markaasna uu ka jeedin lahaa hadalo ku saabsan xaaladdaha dalka.
Xassan Cali Kheyre ayaa ka baaqsaday ka qeybgalka Dood xalay lagu qaban lahaa Muqdisho, taas oo ay si toos ah u baahin lahaayeen lix kamid ah TV-yada Soomaalida oo ku qaatay lacago fara badan, waxaana abaabulay Xaafiiskiisa Raysalwasaaraha.
Wasiiradda Dhalinyaradda & Ciyaaraha dawladda Faderaalka Khadiijo Maxamed Diiriye oo saaxiib dhaw la ah Raysalwasaare Xasan Cali Kheyre, ayaa qabanqaabisay labada kulanba balse fashil ayay wajahday, markii ay ogaatay in cabsi awgeed looga baaqsaday kulamadeeda.
Sarkaal sare oo katirsan Xaafiiska Ra’iisulwasaare Xasan Cali Kheyre ayaa u sheegay Warsidaha Puntlandtimes.com in sababaha baaqashada kulamadan ay tahay xog ammaanka ah oo ay heleen, laakiin ilo kala duwan oo ay la xariirtay Puntlandtimes.com waxay daaha ka rogeen baqdinta dawladdu ka qabto su`aalo ka yimaada dhalinyaradda ka qeybgalaysa.
Talaabada uu qaaday Raysalwasaare Xasan Cali Kheyre, waxay ku beegantay xili ay dad badan is weydiinayaan halka ay Madaxweynaha iyo Raysalwasaaruhu ku wadaan dalka oo ay su`aalo waa weyn hordhigan yihiin qorshahooda Hoggaamineed ee Soomaaliya.
Hadan Rayigeyga ka dhibto R/khayre & madaxweyne farmajo shaqadoda masuliyaded wa so dhamatay waxay ku jiran waqti gabogabo ah,shacbiga somaliyed 2 sano & dhawor bilood waxay ku jireen Tijabo & Dulqaad,Hadeer wa lanacay cid rabta oo Xiseynaysa majorto,Hadey islan ama muslin yihin mesha habaneyen Hadeysan Donan in aay folxumo kaga tagan *Burbur ku yimada Hayadaha Dawliga ah ee mesha ka dhisan oo ummada somaliyed dhisatay,waxay Qadan kareen Qate waxay Qaban karen Qabte inta aan folxumo dhicin mesha habaneyen somali cidey Donto hadorteen.
Shacanka muqdisho waa iney ogaadaan iyagu iney yahiin shacab oosan ahwyn dowlad. Shacanka waa iney ogolaadaan iney beeraha fashaan shaqeystaan. Wadooyinka dhistaan dayac tiraan wax soosaar ismaalgashaan Una hogaansamaan protocalka dowlada.